Afaka Miteny Aymara i ‘Printsy Kelin’ i Saint-Exupéry Ankehitriny · Global Voices teny Malagasy
Afaka Miteny Aymara i ‘Printsy Kelin’ i Saint-Exupéry Ankehitriny
Voadika ny 21 Mey 2016 3:33 GMT
Vakio amin'ny teny English, Ελληνικά, Italiano, русский, Deutsch, Français, عربي, Español
Fonon'ny “Prinsipi wawa”. Sary nifampizaràna be tao amin'ny aterieto.
Sambany ireo mpiteny Aymara no ho afaka hianoka amin'ny fitenin-dry zareo ilay bokin'i Antoine de Saint-Exupéry “Ilay Printsy Kely”, tantaran'ny fihaonan'ny zazalahy kely iray feno misitery tamin'ny mpanamory iray izay nianjera tany afovoan'ny tanihay Afrikana ny fiaramanidina nentiny.
Araka ny tombantombana, manana mpiteny manodidina ny 2,2 tapitrisa eo ho eo ny Aymara izay miparitaka any Andes Afovoany, ao amin'ny faritr'i Bolivia, Però, Shily ary Arzantina. Hatramin'ny 1943 nanontàna azy voalohany, tafiditra ho iray amin'ireo teny 240 efa nandikàna ny boky ‘Ilay Printsy Kely‘ ny Aymara.
Ny Profesora Roger Gonzalo Segura, mpampianatra eny amin'ny kolejy, no nanatontosa ny fandikàna azy ho amin'ny fiteny Aymara:
Bajo el título de “Pirinsipi wawa”, la traducción de esta novela universal corrió a cargo del profesor de quechua y aymara de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) Roger Gonzalo, quien aseguró a Efe que el trabajo le tomó alrededor de dos años.
Miaraka amin'ilay lohateny “Pirinsipi wawa”, Roger Gonzalo, mpampianatra Quecha sy Aymara avy ao amin'ny Pontifical Catholic University of Peru (PUCP) ao Però no nampiandraiketina ny fandikàna ity boky tantara malaza erantany ity, izay nilaza tamin'ny masoivohom-baovao Efe fa roa taona teo no laniny [nanatontosàna hatramin'ny farany] nanaovana ilay fandikàna.
Araka ny lazain'i Gonzalo, tsy nanana olana izy tamin'ny filazàna ny tao anatin'ilay tantara ho amin'ny fomba fiteny Aymara :
“Ao amin'ny fiteny [Aymara], manana tantara maro izahay, izay mahatonga anay haka sary an-tsaina, na hatahotra mihitsy aza. Misy biby sy olona izay tsy misy akory ary tantaram-piainana mahavariana maro koa,” hoy i Gonzalo manamarika. Na izany aza, nisy singa avy amin'ny tontolo Tandrefana, toy ny lalamby, izay tsy mbola voarafitra amin'ny fiteninay, izany hoe, tsy maintsy nampifanaraka azy tamin'ny fitsipiky ny fiteny izahay. Tamin'ny tranga hafa, dia tsy nilaina ny namorona teny vaovao. Ohatra, ny teny tahàka ny ‘fiaramanidina’ [avión amin'ny fiteny Espaniola] sy ‘milina’, izay novaina fotsiny ho ‘aviona’ sy ‘motora’.
Teraka tao amin'ny vondrom-piarahamonina Chatuma ao amin'ny distrikan'i Pomata, any amin'ny faritany Punean ao Chucuito i Gonzalo. Tamin'ny famaritana ilay boky vaovao, dia hoy izy :
Boky natao ho an'ny rehetra izy ity. Ny hafatra (izay azo ampitaina ho an'ireo vondrom-piarahamonina Andeana) dia fomba iray ahafahan'ny olona mijery ny fiainana, manazava zavatra manodidina azy sy ny mety ho dikan'izy ireny ho an'ny fiainan'ilay olona tantaraina ao anatin'ny “Ilay Printsy Kely“. Kanto raha ny endriny ety ivelany.
Ao amin'ny Twitter, afaka mahita sary sy rohy mitondra mankany amin'ny fandikàna sy ny asa nataon'i Gonzalo tao ambadik'io ianareo :
Afaka vakiana amin'ny fiteny Aymara ankehitriny Ilay Printsy Kely.
Roger Gonzalo Segura, mpampianatra ny teny Quechua sy Aymara, no nampiandraiketina ny fandikàna azy.
Un profesor peruano tradujo “El Principito” al aymara – Nodal Cultura – https://t.co/ZIvSP3B00z
Nadikan'ny profesora Peroviana iray ho amin'ny fiteny Aymara ny “Ilay Printsy Kely”.
“El Principito” fue traducido al aymara. ¿Cuánto tiempo duró este trabajo? Te lo contamos ►https://t.co/znRmqcLvyn pic.twitter.com/WBZ4mhmF63
Nadika ho amin'ny fiteny Aymara ny “Ilay Printsy Kely”. Toy inona no faharetan'ny asa? Holazainay anareo ny momba io.
Prinsipi Wawa – Ilay Printsy Kely voadika ho amin'ny fiteny Aymara.
i Profesora Gonzalo dia miteny ihany koa ny Quechua, fiteny iray miasa be ho an'ireo 10 tapitrisa mpiteny azy ao Andes Afovoany. Ankoatry ny asa nataony nandika ny Ilay Printsy Kely, dia izy no mpiandraikitra ny Quechua Rimarina, fandaharana iray alefa ao amin'ny fantsona Youtube an'ny Anjerimanontolo, izay ampianarana ny fiteny Quechua.